Awoodda Milateri ee Turkiga & kaalinta uu Dunida uga jiro (Akhriso Warbixin) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Turkiga ayaa ka mid noqday dalalka ugu waaweyn dunida ee saameynta yeeshay sanadihii dambe, markii ay ciidamadiisa galen dalka Syria, kadibna ay guul kasoo hoyeen dalka Libya, siiba diyaarahooda is wada ee Drone-ka oo jebiyey Jeneraalkii Liibiyaanka Khalifa Haftar oo ay taageerayeen Ruushka, France, Imaaraadka, Masar, Sacuudiga iyo dalal kale.
Turkiga wuxuu ka mid yahay dalalka Gaashaanbuurta NATO, wuxuu saldhig weyn ku leeyahay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, isagoo ciidamo kale geeyay dalka Qatar. Wargeyska the Global Fire power oo wax ka qora arrimaha milateriga caalamka ayaa ku qiimeeyay Turkiga in uu yahay ciidanka ugu awoodda badan Bariga Dhexe.
Dowladda Turkiga ayaa sanadihii dambe xoogga saartay maalgelinta ciidanka, kadib afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016-ka, waxaana xukuumadda Ankara ay xiriir milateri la yeelatay dalal ay kamid yihiin Ruushka, iyadoo saameynteeda ku balaarisay dalalka Qatar, Liibiya iyo Soomaaliya oo ay ku leedahay saldhigga ugu weyn ee ku yaala meel ka baxsan Turkiga.
Dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 80 milyan oo qof ayaa dadka shaqeeya waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 42 milyan oo qof, waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda uu wargeyska ku sheegay 735 kun oo askari.
Ciidanka sida tooska ah u dagaal geli kara ee Turkiga ayaa lagu qiyaastay 355 kun oo askari, halka ciidamada heegankana ama keydka ku jira ay gaarayaan 380 kun oo askari.
Turkiga ayuu GFP sheegay in ay ka mid yihiin 10-ka dowladood ee ugu awoodda badan caalamka, waxaana diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga lagu sheegay 1,067 diyaaradood, kuwaas oo isugu jira noocyo kala duwan.
Gantaalada s-400 ee Ruushka
Ciidanka dhulka ee milateriga Turkiga ayaa kaalinta toddobaad waxaa ay ka galeen ciidamada ugu awoodda badan ee caalamka. Taangiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3,200, halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkana ay gaarayaan 9,500 oo baabuur.
Previous articleK/Galbeed oo beenisay Qorshe lagu eedeeyay inay u fulisay Madaxtooyada Somalia
Next articleXOG: Xaalad kusoo korortay Guddoonka Labada Aqal ee Barlamaanka & kulamo kala gaara..